IMoja Love imandla ngendlakadla nolimi oluqinile – Bayede News
Enye yamaChannel ekhula mawala kubathandi
Posted on 1 July 2019 2 July 2019 by Bayede-News
Esinye sezigcawu zohlelo iRea Tsotella
Enye yamaChannel ekhula mawala kubathandi bethelevishini wu-157 enikwe igama leMoja Love. IMoja Love iyisiqukathi esinezinhlelo ezishayelwa ngabethuli abehlukene ezifana no-Uyajola 99 okuwuhlelo oluhambe luzingela abantu abangethembekile ebudlelwaneni bezothando ngenhloso yokubabamba oqotsheni. Lolo hlelo lushayelwa wuJub Jub Marogaanye ongumculi weHip-Hop oke wabhadla isikhashana ejele ngecala lokushayela budedengu okwaba nesiphetho sokufa kwabafundi abanye balimala kanzima eSoweto. Olunye olukhona lunesihloko esithi Reatsotela olushayelwa yinceku enguBishop Makamu kanti kukhona nolunesihloko esithi “Ufelani” bese kuba khona olwethiwe ngelikaZodwa Uncensored oluveza intokazi uZodwa Wabantu izikhama umnyoluka eziphathelene nempilo yayo yocansi.
Iqiniso elingephikwe muntu yileli lokuthi wonke umuntu unelungelo eligunyazwe wuMthethosisekelo lokubuka, asho noma enze akuthandayo. Noma kunjalo futhi wona uMthethosisekelo kukhona lapho ukuvimbela khona ukuvezwa kwezinto ezingase ziphazamise imizwa nemiqondo yabantu ngandlela thize. Yikho phela kuba khona isexwayiso ngokusuke kuzovezwa kwenzele ukuthi kuvalwe ithelevishini kusenesikhathi uma obukelayo ezophazamiseka ngokuzokhonjiswa kuyo.
Sekwenzekile konke lokho ulokhu usale njalo umbuzo wokuthi lezi zinhlelo eziboniswa kuthelevishini ngabe ziyakha yini. Akuve sekunenkululeko enkulu yokuthatha izinto zaphesheya kwezilwandle, ikakhulukazi e-United States of America (USA) zithuntuthwe bese abantu bezozakhela imali ngazo bengasazihluphanga ngokuthi zizodala monakalo muni ezimilweni zomphakathi, ikakhulukazi kwabasakhula. Uhlelo olushayelwa wuJub Jub ngabe aluve luthathelwe kolwase-USA oluke lwavezwa kuthelevishini lubizwa ngeCheaters? Lolu lwenceku okubuye kududulwane ngesibhakela kulo akulona yini lolu lukaJerry Springer wase-USA okuchashwana ngenhlamba kudonswane ngezihluthu kulo?
Zonke lezi zinhlelo zinokukodwa okufanayo kuzo, zinolimi olulumela ngendlela eyisimanga, nodlame oluhlasimulisa umzimba. Lolu olusihloko sithi: “Ufelani” lukhombisa isihluku sokubulawa kwabantu ikakhulukazi abangabagilwa bodlame lwasemindenini. Bekungebe kubi kakhulu uma okudingidwayo kulolu hlelo bekugcina ngokuthi kuxoxwe ngakho kunikeze abathintekayo ithuba lokwamukela okwenzeka baqhubekele phambili nempilo. Nokho okwenzeka laphaya wukuphindwa kwesigameko sikhonjiswe bukhoma njengoba senzeka. Uma isigameko sesivela kanjalo sisuke singasathinti lowo mndeni kuphela kodwa nababukeli bethelevishini ngobubanzi. Umbuzo uthi ngabe lokhu kusiza bani. Ngabe kusiza abagileka ngesigameko noma ababukeli bethelevishini? Kuyangabazisa ukuthi kukhona abasizakalayo ngalesi simo ngaphandle kokukhombisa ubulwane obunengozi yokuthi uma bubonwe yizingane nabanye abathile bangafisa ukukuphinda ezimweni ezehlukile.
Kuyefana nasolimini olusetshenziswayo. Uhlelo lukaZodwa Wabantu lunamagama angafanele nhlobo ukukhulunywa ohlelweni olubukelwa wumndeni. Uphenyo oluke lwenziwa ngamafilimu nezithombe zethelevishini e-United States of America lukhomba ukuthi udlame olukhonjiswayo luba nomthelela omkhulu ezimilweni zezingane ezikhulayo. Isithombe sakusihlwa esasikhonjiswa ngowe-1973 ku-American Broadcasting Company sinesihloko esithi Fuzz, kwathi uma kuphenywa ngomthelela waso ekuguqukeni kwezimilo zabafana abakhulayo kwatholakala ukuthi balingisa abakubona esimweni sempilo yangempela. Abafanyana baphoqa intokazi esencane u-Evelyn Wagler waseBoston ukuthi izibhunyele ngophethiloli igcine ngokufa. Kwagxekwa isithombe iFuzz ngokufa kuka-Evelyn ngoba labo bafana babelingisa ababekubone kuthelevishini. Iphephandaba iNew York Times yakuvuma ukuhlobana kwesigameko sika-Evelyn nesithombe esakhonjiswa kuthelevishini ngokubeka izinto ngale ndlela: “Lesi sigameko esinyantisayo ngeke sazitshwa.”
USolwazi waseMichigan State uThomas F. Baldwin waba nengxoxo nabadidiyeli bezinhlelo zethelevishini ezingama-48, ababhali nabaqondisi bezinhlelo zethelevishini ezinodlame olwedlulele. Wabeka kanje: “Sithole ukuthi okuyikhona kufuneka yizenzo “ezishukumisa ngokwanele” noma “udlame olwanele ukwenza obukele angasuki phambi kwethelevishini,” kuphawula uSolwazi uThomas. Umbhali weziqephu yena wabeka kanje: “Abezikhangisi bafuna into ezoshukumisa ukuze kutholakale ababukeli ngobuningi. Udlame luletha ukukitazeka kanti lokho kukhuphula izibalo zababukeli.” Lokho kufakazelwa yinzuzo enkulu etholakalayo. Izibalo zikhomba ukuthi imboni yethelevishini yangenisa izigidi ezingama-653 zamadola engenisweni isiyonke eyizigidigidi ezi-3.4 nokwakuyinzuzo engama-19%
Ezweni elinjengeNingizimu Afrika lapho isimo sobugebengu seqa khona amadolo, kunesidingo esinqala sokulawula okukhonjiswa kuthelevishini. Ngonyaka wezi-2018 imibiko yobugebengu yaveza izinombolo eziyizigidi ezi-2.09 zezigamelo zobugebengu ezabikwayo. Lokhu kukhomba isidingo esinqala sokulwisana nezisusa zodlame. Sekucace ngokusobala ukuthi izinhlelo ezikhonjiswa kuthelevishini ngokocwaningo olwenziwe emazweni asethuthukile zinokuhlobana nokwanda kwezigameko zobugebengu.
IMoja Love kunesidingo sokuthi ibhekisiswe ukuthi izinhlelo ezibalwe ngenhla ngaphansi kwayo azinamthelela yini ekumoshakaleni kwezimilo nasekukhuleni kobugebengu eNingizimu Afrika. Zingakhula izinombolo zababukeli zingenise imali kodwa futhi khona lapho leyo mali iyophinde iphelele ekulwisaneni nobugebengu. Lokho-ke kuyefana nokuthi izwe lisebenzela emuva. Akwenziwe okuthile ngolimi olulumelayo nendlakadla ezinhlelweni zeMoja Love. Kuyingozi ukulandela kakhulu inzuzo kukhohlakale izimilo zabantu ikakhulukazi intsha yaseNingizimu Afrika. Izwe linethalente elanele ukuthi kungaqhanyukwa nezinhlelo ezingakha kunokuba kudilizwe ikusasa lesizwe.